Fampiharana Vaovao Manampy Ireo Olom-pirenena Hamantatra Izay Fantatr’ireo Mpamatsy Aterineto Ao Hong Kong Momba Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Fampiharana Vaovao Manampy Ireo Olom-pirenena Hamantatra Izay Fantatr'ireo Mpamatsy Aterineto Ao Hong Kong Momba Azy Ireo
Voadika ny 29 Avrily 2016 14:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, srpski, Español, English
Pikantsary avy amin'ny accessmyinfo.hk
Nosoratan'i Kris Cheng ity lahatsoratra ity ary navoaka voalohany teo amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 19 Aprily 2016. Avoaka ato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fiarahamiasa ny dika etsy ambany.
Fampiharana iray vaovao ety anaty tranonkala, novokarin'ireo vondrona mpandresy lahatra sy mpikaroka iray momba an'i Hong Kong, no mikendry hanome fanazavan-tsaina tsara kokoa ho an'ny vahoaka hoe inona marina no fantatr'ireo mpanome tolotra aterineto sy finday mikasika azy ireo, ahoana no fomba ampiasàn'izy ireo ny angona ary iza no izaràn'izy ireo azy io.
Nalefa tamin'ny 19 Aprily teo mba hahafahan'ireo olom-pirenena miaro ny fiainany manokana sy ny mikasika azy manokana, ny tambajotra Access My Info. Mamoaka taratasy iray ho an'ireo mpanome tolotra aterineto sy ireo orinasam-pifandraisana amin'ny finday ilay vohikala amin'ny alalana kitika vitsivitsy, ho an'ireo mpampiasa azy mba halefa ho an'ireo manampahefana tompompandraikitra mivantana amin'ny fiarovana ny fiainana manokana ao amin'ireo orinasa mba hangataka ireo angondrakitra momba azy ireo ihany.
Azo alefa amin'ny mailaka mahazatra ny taratasy izay vokarin'ilay fampiharana. Nefa manitrikitrika ireo orinasa vitsivitsy avo lenta, anisan'izany ny CSL/1010, ny China Mobile ary ny SmarTone, ny handefasana izany amin'ny alalan'ny taratasy alefa paositra.
Ny tanjon'ny tetikasa dia ny mba hanamorana kokoa ny dingan'ny fahazoana ny angon-drakitra sy hisarihana ny fahatsiarovan-tenan'ny vahoaka mikasika ny fiarovana ny angon-drakitra manokan'ny tena ary ny maha-zava-dehibe azy. Nifototra tamin'ny dika nivoaka tany am-boalohany novokarina tao Kanada nataon'ny Citizen Lab ao amin'ny Anjerimanontolon'i Toronto sy ny vondrona mpandresy lahatra Open Effect izy io.
Fitosatosaky ny fitarainana
Yu Yee-ting, manmpahefan'ny mpisolovavao ao amin'ny In-media – fikambanana iray ao Hong Kong mandray anjara ao anatin'ny tetikasa – nilaza tamin'ny HKFP fa nisy fiakarana ny isan'ireo firainana any amin'ny Biraom-panjakan'ny Kaomity misahana ny Fiainana Manokana ho an'ny Angon-drakitry ny olona Tsirairay, izay “ny maro dia mikasika ireo angon-drakitra fitarainana”.
Tamin'ny taona 2015, naharay fangatahana efa mitontaly 18.456 ilay Birao, manome fitomboana 7 isan-jato izany raha oharina amin'ny taona 2014. Ny efatra ambiny folo isan-jato amin'ireo fanadihadiana ireo dia nahitana fangatahana fahazoana angon-drakitra, ny 12 isan-jato mikasika ny asa, ny 11,9 isan-jato mikasika ny fampiasana ny angon-drakitra manokana ho amin'ny tsena mivantana, ary ny 6,5 isan-jato kosa mikasika ny fanangonana na fampiasana ireo laharan'ny karapanondro na ireo kopia ao Hong Kong.
Mamokatra làlana ara-dalàna ho an'ny vahoaka ilay vohikala mba hahazo ny angon-drakitra manokan'izy ireo rehefa nahazo Personal Data Privacy Ordinance (didy hahafahana mahazo nymomba ny tena manokana), izay mandidy ireo orinasa manangona sy mampiasa ny angon-drakitra manokana mba hanome fahafahana ho an'ny tsirairay hahazo ny vaovao mikasika azy ireo manokana ao anatin'ny fetr'andro 40, amin'ny sarany ambany na tsy misy mihitsy.
ilay fitaovana manana endrika fiarovana ny fiainana manokana avy amin'ny Citizen Lab dia miantoka ny hoe tsy mivoaka fa ao anatin'ny efijerin'ilay mpampiasa azy tanteraka no mihodina ny torohay rehetra napetrak'ireo mpampiasa azy, ary tsy ho zaraina amin'ny tetikasa.
Manantena ny tetikasa fa hahazo fijery mazava amin'ny fomba fanangonana ny angon-drakitra manokana, ny fikirakiràna sy ny fomba fizaràna azy ao Hong Kong.
Asaina maimaimpoana ireo mpampiasa mba hamaly fanadihadiana momba izay valiny voarainy avy amin'ilay orinasa voalaza. Atambatra miaraka amin'ireo hafa ireo valiny mba hanampiana ireo vondrona hahatakatra tsara kokoa izay mitranga rehefa mametraka fitarainana ny olona.
Ireo fikambanana ao ambadiky ny tetikasa voafaritra dia ny In-media sy ny Keyboard Frontline ary i Dr. Lokman Tsui, mpampianatra mpanampy ao amin'ny Sekoly ho an'ny Asa fanaovana Gazety sy Serasera an'ny Anjerimanontolo Shinoa ao Hong Kong, sady mpikambana iray amin'ny Ivon-toerana Berkman ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina ao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard.
12 ora izayJapana